Wadamada Afrika oo looga digay kororka kooxaha Argagixisada | Universal Somali TV
Wadamada Afrika oo looga digay kororka kooxaha Argagixisada
Hogaamiyeyaasha wadamada Africa ayaa shirka sanad laha ah ku yeelanaya dalka Itoobiya, waxaana looga hadlayaa xakameynta colaadaha iyo diirada lagu saarayo xaalada dalalka Suudaanta Koonfureed iyo Liibiya.
Shirkaan oo noqonaya midkii 33-aad ayaa Axadii shalay daaha looga qaaday xarunta urur goboleedka Afrika ku leeyahay magaalada Addis Ababa ayaa waxaa shir gudoominaya madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa.
Iyadoo la filayo in maanta la soo gabagabeeyo ayaa waxaa lagu wadaa in laga soo saaro war murtiyadeed la xiriira xakameynta hubka Afrika iyo sidii diirada loo saari lahaa hormarinta Qaarada.
Gudoomiyaha guddiga Afrika mudane Muuse Faki Maxamed oo qudbad ka jeediyay shirka ayaa walaac ka muujiyay dhibaatada amni darro ee qaarada iyo kororka kooxaha Argagixisada.
Mr Faki ayaa dhanka kale soo hadal qaaday isqabqabsiga doorashooyinka ka dhaca dalalka Afrika oo in mararka qaar ay uga sii darayaan dhibaatada, waxaana uu ugu baaqay hogaamiye yaasha gobolka in ay la yimaadaan xaalad lagu maareyn karo Arintaan.
Ugu danbeyn wuxuu hadalkiisa ku soo koobay hadii aan laga fiirsan arintaan in ay keeni doonto in wadamada qaar ay gacanta u gali doonaan kooxaha Argagixisada.
Madaxweyne Ramaphosa ayaa soo jeediyay in bisha May la isugu yimaado kulan looga hadlayo dagaalada sokeeye ee ka taagan wadamada Suudaan iyo Liibiya.
Kan-xigaIsmaamulka Mandera oo sheegay in ay d...
Kan-horeWalaac xoogan oo laga muujinayo xaala...
54,568,816 unique visits